Umhla My Pet » 15 Best Akhawunti Twitter ukuba Landela ngenxa Advice Dating kwi 2015
ukubuyekezwa: Jan. 17 2021 | 4 min ukufunda
Kuluntu lwethu lwangoku eziqhutywa ngokwamanani, sithembele ekufumaneni uninzi ulwazi lwethu ukusuka intanethi. Abantu abaninzi basebenzisa amajelo yoluntu ingakumbi ukugcina uqhagamshelana nabahlobo kunye nosapho kwaye ukuba bahlale luhlaziywa iziganeko zangoku zehlabathi, kodwa kuthekani ngokufumana icebiso ubudlelwane?
Twitter ibonelela abasebenzisi ithuba lokwabelana ngolwazi 140 abalinganiswa okanye ngaphantsi kunye nabalandeli babo. Abantu abaninzi baye bangena kwi ithuba lokusebenzisa Twitter nanjengendawo ephuma kwi ikhonkco kuphela ukuba umsebenzi wabo kodwa ukunika iingcebiso ukuba abo banomdla.
Kukho ezifana ababhali ukuthandana kunye nolwalamano, bloggers neengcali ngokusebenzisa Twitter njengendlela amakhowa phandle ingcebiso ukuthandana. Mna laqulunqa uluhlu ezinye iingxelo Twitter kakhulu egxininisa ukuthandana neengcebiso ubudlelwane. Enoba ufuna amanye amacebiso okuba zingaphuculwa njani online iprofayile yakho ukuthandana okanye bafuna icebiso ngendlela yokuhlangabezana lentlungu embi, ezi ngxelo Twitter wa na ukhuselekile!
Ngoko ke ngaphandle maseko, apha kukho uluhlu (lwam oluphantsi) le 15 eyona akhawunti Twitter ukulandela ukuba ufuna iingcebiso ukuthandana:
Shannon yi Psychologist ukuthandana umbhali ubudlelwane ngubani ezipapashwe kutshanje incwadi olujikelezayo ngeenxa namaxhala ukuthandana ngobo- ndlela namacebo kwi ukuwisa ukuba ixhala kungena kwihlabathi ukuthandana. Thatha ujongo feed yakhe Twitter for amanqaku iingcebiso ukuthandana kunye namacebo.
Julie yinto oyingcali nebar ihlabathi ukuthandana online kwaye rhoqo zizithuba amakhonkco amanqaku neevidiyo malunga isikhokelo ulwalamano lwakhe. Landela ungalondli Twitter ukuba unomdla wokufunda okungakumbi ngendlela ukujongana ihlabathi ukuthandana online.
Simone yi sex & ubudlelwane zebloga ngubani ulwaphulo nayiphi zonke izihloko owamnikayo. Ukuba ukhangela umbhali ngesibindi axoxe ngezihloko eqala ukuthandana intanethi ukuya kuthenga njani ngerie sexy, qiniseka ukuba ndihlole ungalondli Twitter for amakhonkco amanqaku afanelekileyo.
UAron Horton kunye Josh Nalven; Guy Abahlobo Podcast (@TheGuyFriends)
UAron Yosh ngabahlobo ababini kubamba podcast ijolise ukuthandana, ubudlelwane kunye besini iingcebiso. Xa kuziwa izihloko bakulungele ukuxoxa, akukho nto zingafikeleleki. Ukuba abathanda ukuva ingcebiso owawukho bafana babini funny nangokunyaniseka ngokupheleleyo, sukani kubo phezu Twitter.
Jen ke umbhali kunye nolwalamano eyayisazana anyuse amacebiso abo abalambileyo ukufunda okungakumbi ngonaphakade-angaziwa ukuthandana zehlabathi. Yena axoxe kwizifundo ezifana ekugcineni ubudlelwane-elide umgama, ukucwangcisa indlela esixabiseke umhla wokuqala nendlela ukujongana nokwahlukana, phakathi kwezinye izihloko ezininzi. Skrola Twitter wakhe ukondla ukufumana amakhonkco amanqaku ayo ukuthandana nolwalamano kwakunye kwezinye iincam ezikhawulezayo.
Epreli na nomqeqeshi abathandanayo ngokukodwa amakhowa phandle iingcebiso ukuthandana abafazi phezu 40. amanqaku ayo ukuthandana nolwalamano zichanile yaye ulwazi, kakhulu ezifana yakhe Twitter, ngoko ke khangela yakhe ukuba ufuna iingcebiso ukuthandana amabhinqa aqolileyo.
Christan na ingcali abathandanayo abhale umhlathi Kwaye yiloo Kutheni Wena Single. Yena axoxe ngezihloko ukusuka ukwenza ngomhla wokuqala amangalisayo iingenelo enye indlela. U khuthaza kwakhona abalandeli bakhe Twitter ukuzibandakanya naye ngokufaka imibuzo yabo ukuthandana kwakho. Ukuba umbuzo ukuthandana otshisayo ofuna waphendula, khangela phandle feed yakhe Twitter.
Thought Catalog anyuse ingqokelela abathandanayo, amanqaku ubudlelwane kunye neengcebiso sex ebhaliweyo ngabanikeli ezininzi ezahlukeneyo kwiwebhsayithi yabo. amanqaku zabo soloko funny kwaye chana kancinane, ngoko le website (kwaye Twitter feed) ngogqibeleleyo ukuze abo bayiqondayo indlela nabath-.
uYoshuwa Pompey (@JoshuaPompey)
UYoshuwa ingcaphephe ukuthandana online othe wabhala amanqaku amaninzi kwiminyaka emalunga yakhe yobungcali. Ekubeni kukho pro kummandla ukuthandana online, yena axoxe izihloko ezifana ukuba bayile indlela email top-esemgangathweni sibufeza iprofayile yakho ukuthandana online. Yosh rhoqo ihlaziya akhawunti yakhe Twitter kunye namanqaku afanelekileyo, ngoko qiniseka ukuba ukhangela phandle afide xa ufuna amanye amacebiso malunga ukuthandana online.
YourTango yenye website ukuba enentabalala amanqaku ukuthandana neengcebiso nolwalamano wenziwa iqela elikhulu ababhali. amanqaku bayifikelela yonke into phantsi kwelanga malunga rhandzana kummandla, ngoko ke khangela phandle umxhesho wazo Twitter ukufumana amanqaku ezithetha nantoni na yaye yonk 'ukuthandana.
izilwanyana uSolomon (@thedatingtruth)
Izilwanyana na ingcali abathandanayo unika ingcebiso ubudlelwane elungiselelwe nakumantombazana kwaye ibonelela iimbono zakhe malunga nemiba eyahlukeneyo ukuthandana nabantu abaninzi abaye bajamelana, ezifana ukuxela njani ukuba umntu wena othandana ukufanele ukuba njani ukuyeka itsale abantu engalunganga. Landela yakhe on Twitter ukufumana ukuba amanqaku ayo kwaye ubudlelwane mazwi athile.
UDan umbhali netshantliziyo eyaziwa ngokuba ikholam iingcebiso sex Savage Love kwakunye podcast wakhe Savage Lovecast, apho axoxe iingxaki nolwalamano zemveli kunye non-zemveli. Khangela ukuba afide Twitter ukuba ukhangela hilarious, iingcebiso ukuthandana kodwa athetha kwiisms.
UErin na senyathi abathandanayo anyuse kuphela ingcebiso ebhaliweyo kodwa nginginya yakhe yerediyo okungakhatywa ngeengqiqo yayo ehlabathini ukuthandana. izihloko bakhe ziqala tips kiss wokuqala ndithandana kwi mali. Landela yakhe on Twitter for amakhonkco iividiyo, amanqaku neencam ukuthandana.
UAntonio yePsychology and Relationship yokuNyanga lowo unika iingcebiso kunye nezisombululo naliphi zonke iintlobo nobhideko ubudlelwane. Thatha ujongo akhawunti yakhe Twitter, njengoko wayeqhele Izithuba iincam nolwalamano olukhawulezileyo kuchaphulo kunye nonxulumano amanqaku akhe.
Wilma yi lwebloga ukuthandana ebingelela icebiso lakhe ngokuthandana emva komtshato, esekelwe kakhulu ngamava akhe obuqu. Khangela akhawunti yakhe Twitter ukuba unomdla wokufunda ngayo iimbono zakhe malunga kungena echibini ukuthandana emva komtshato.